सानैदेखि लड्दै आइयो, अब त आराम होला नि भनेको व्यापारीसँग लड्नुपर्‍या छ : मातृका यादव
काठमाडौं –उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफू सिन्डिकेटविरुद्ध लडिरहेको बताएका छन् । आयल निगममा पुराना व्यापारीहरूको सिण्डिकेट रहेको भन्दै उनले सिन्डिकेटविरुद्ध व्यापारीहरूसँग लड्नुपरेको बताए ।
नेपाल आयल निगमको ४९औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई बिहीवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भने– ‘बाह तेह्र वर्षको उमेरदेखि लड्दै आइयो । अब त केही आराम होला कि भन्यो, फेरि लड्नु पर्ने, को–को सित लड्नु ?’
विक्रेता विनियमावली बनाउन भनेर आफूले निगमलाई पटक–पटक निर्देशन दिएपनि हेलचेक्र्याइँ गरेको मन्त्री यादवले बताए । यसैले निगम व्यापारीहरूको सिन्डिकेटको भूमरीमा परेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ ।
‘मैले नौ महिनादेखि नयाँ विक्रेता विनिमावली बनाऊ भन्दै गर्दा अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो मात्रै सुनेँ अहिले राय परामर्शका लागि ओपन गरिएको छ, भनेर ।’
खुला बजार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट अस्वीकार्य रहेको उनले बताए । ‘प्रतिस्पर्धाको जामाना हो, सबैले प्रतिस्पर्धा गरौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘सबै चिजमा प्रतिस्पर्धा गरौं । सिन्डिकेटबाट प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन ।’
मातृका गाली मात्रै गर्छ, अर्थमन्त्रीले सुन्दैनन्
मन्त्री यादवले पेट्रोलियम व्यवसायी तथा उपभोक्ताको गुनासोका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र आफ्नो मन्त्रालयबीच समन्वय नहुने भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरे । यी दुई मन्त्रालयबीच जस्तो समन्वय अन्त कतै नरहेको उनको जिकिर छ ।
साथै उनले आफूले गाली मात्र गर्ने र अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा) ले कुरै सुन्न नचाहने भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरे । ‘मातृका खालि गाली मात्रै गर्छ, र अर्थमन्त्रीले कुरै सुन्दैनन् भन्छन्,’ उनले भने, ‘जब कि हाम्रो मन्त्रालयको जस्तो छलफल धेरै ठाउँमा हुँदैन । हामीले कुरा सुन्नमा नै धेरै समय खर्च गरिरहेका छौं ।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटिसकेको भन्दै उनले अब सार्वजनिक सवारीको भाडा दर पनि घट्नुपर्ने बताए । ‘पेट्रोल÷डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ घटिसक्यो, बसको भाडा उस्तै छ । भाडामा पनि त अलिकति विचार हुनुपर्‍यो नि ! विचारै गर्दैनन् । बढ्यो भने बढाउने मात्र, घटाउने विचारै छैन ।’
कार्यक्रममा निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई विश्वास गरेकोमा प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
शान्ता चौधरीको प्रश्न– गरीबका आँशु देखेर प्रतिपक्षलाई अलिकति पनि दया लाग्दैन ?